Vanotaura kuti munhu wese ane "mapepa ari mumusoro wake", zvinoreva kuti vanhu vose vanyanyisa uye vanokanganisa mumapfungwa. Zvisinei, zvirwere zvepfungwa zvinotoda kururamiswa uye kurapwa, sezvo munhu asingachagoni kuita zvinodiwa nevevanhu uye kugadzirisa zvinetso zvoupenyu hwake.
Mafungiro epfungwa anokonzera zvirwere
Nyanzvi dzinotaura kuti zvirwere zvepfungwa zvinogona kukonzerwa nezvose zvinokonzera uye zvisingagumi zvinokonzera. Muchiitiko chekutanga, zvose zvekunze zvinokonzera huropi hunokonzerwa nehutachi hwakasiyana, kukuvara, zvirwere zvemuviri. Zvimwe zvinokonzera hazvirevi nechokunze uye izvo zvinonyanya kukoshesa hutano. Asi mune chero zvipi zvazvo kune mibvunzo yakawanda mumatambudziko epfungwa mupfungwa pane kupindura. Mumwe haagoni kutaurira nechivimbo chinokonzera ichi kana chirwere ichocho chepfungwa, uye kana pane kuiswa mukati kunobatanidza nekukurudzirwa kubva kunze, munhu pasinei nehupenyu hwake anogona kuve akabatwa nehutano hwepfungwa mumuviri.
Kuwirirana kwezvirwere uye matambudziko epfungwa zvakadzidzwa uye zvakadzidzwa neyanzvi dzakawanda. Hazvisi zvekuti vanotaura kuti zvirwere zvose zvinobva mumitsipa. Kunyange pasina ruzivo rwezvokurapa, zviri nyore kuona kuti vanhu vane manyawi, vasingafungi uye vasina kugadzikana mupfungwa vanowanzova nemhando yezvirwere zvinokonzera. Anozivikanwa munyika yose, Louise Hay, uyo, kunyange zvazvo asiri chiremba, asi iye akatanga nheyo dzekubatsira, akapa vanhu vazhinji mukana wekubatsira ivo uye kubvisa matambudziko akawanda epfungwa. Ndiye iye akavaka runyora rwemagariro ehutano hwechirwere. Nekubatsira kwayo unogona kunzwisisa kuti zvikonzero zvipi zvemukati zvinokonzera chirwere chinotambudza nekuchirasa.
Chirwere chimwe nechimwe murunyorwa urwu chine zvakakosha zvepfungwa. Munyori pachake anotaura kuti akakwanisa kukunda kenza pasina kupindira mune zvechiremba, kungosiya kurega kwekutuka uye kukanganwira avo vakambomutsamwisa.
Kunyora uye unhu hwemunhu
Kusarura - marudzi uye mafomu
Nyika yemweya yevanhu
Mhando dzekutarisa - chikamu, chinowanikwa munzanga yanhasi?
Iwe ungakanganwire sei nekuda kwezvikanganiso zvekare?
Mabhuku anobatsira ekufambisa
Chii chinofanira kuunza kubva kuMexico?
Ungadya sei mushure mokunge urovedza muviri?
Cocktail nguo dzechato
Tambanudza denga mumudziyo wekugezera - ungasarudza sei nekugadzira chinhu chakasiyana-siyana?
Turufu tsvuku - chii chaunofanira kupfeka uye kuti ungaita sei miseve yefashoni?
Gwyneth Paltrow anopa kubatsira Brad Pitt uye Angelina Jolie kuburikidza nekurambana
10 Zvikonzero zvekurambana-ngativei kuzvidzivirira
Helenium - kutarisa uye kutarisira munzvimbo yakazaruka
Sei usingafaniri kutya chiremba wemazino?
Adriana Lima akachengetwa mushure mokunge aine Gala Gala 2017 mukambani yekare-mukomana Julian Edelman
Soap mu microwave
Kugara muimba yefesheni mune zvekare
Nzira yekukurira greens pahwindo sill?